Tag: Siilaanyo | Sagal Radio Services
Madaxweynaha Somaliland oo ku baaqay in dib loo bilaabo wada hadaladii Soomaaliya iyo Somaliland
Madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo maanta khudbad sandeedkii dastuuriga ahayd u jeediyey labada gole ee Wakiilada iyo Guurtida Somaliland.
Madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo oo Magacaabay Mas'uuliyiin ka tirsan Xukuumaddiisa
Madaxweynaha Somaliland Axmed Siillaanyo ayaa xallay xilli dambe soo saaray isku shaandheyn iyo magacaabid masuuliyiin cusub, taas oo qaarna xilkii ka qaaday qaarna isku bedelay.
Madaxweynaha Somaliland Axmed Siilaanyo oo isku shaandheyn ku sameeyay Qaar ka mid ah Golaha Wasiirada
Madaxweynaha Maamulka Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa digreeto uu soo saaray waxaa uu xil ka qaadis, magacaabid iyo isku bedel ballaaran uu ku sameeyay xubnaha Golaha Wasiiada, Wasiir kuxigeeeenada.
Siilaanyo oo Hargeysa ku noqday kana warbixiyay safaradiisa dibadeed
Sagal Radio Services • News Feature • May 6, 2013
Madaxweynaha maamulka Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilanyo), ayaa shalay dib ugu laabtay magaalada Hargeysa ee xarrunta Somaliland, ka dib safar dhowr toddobaad qaatay oo uu dibbadda Somaliland uga maqnaa.
Madaxweyne Siilaanyo oo Somaliland ku noqday kana hadlay ballan qaadyo ay Imaaraadka Carabta u soo sameeyeen
Sagal Radio Services • News Report • March 29, 2013
Madaxweynaha maamulka Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo wafdi uu hoggaaminaayo, ayaa shalay dib ugu laabtay Somaliland, kadib socdaal uu ku tagay dalka Isu tagga Imaaraadka Carabta.
Madaxweyne Siilaanyo oo sheegay inaysan ka qeyb gali doonin Shirka London
Sagal Radio Services • News Report • March 16, 2013
Madaxweynaha maamulka Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo),ayaa sheegay in maamulkiisu aanu ka qeyb gali doonin shirka bisha May dalka Ingriiska lagu qabanayo ee looga hadli doono arrimaha dalka Soomaaliya.
Madaxweyne Siilaanyo oo darajooyin siiyay markii ugu horreeysay saraakiisha Meleteriga Somaliland
Sagal Radio Services • News Report • February 3, 2013
Madaxweynaha maamulka Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, ayaa maanta ka qeyb galay 19 sano guuradii ka soo wareegatay markii la’aas aasy ciidamada meleteriga ee maamulka Somaliland.
Siilaanyo oo sheegay ineysan ka xumeyn horrumarka ay dowladda Soomaaliya gaarto
Madaxweynaha maamulka Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa soo dhaweeyay aqoonsigii ay dowladda Mareykanka siisay dowladda Soomaaliya.
Madaxweyne Siilaanyo oo xarriga ka jaray mashaariic dhowr ah gudaha Boorama
Madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo dhawaanba socdaal ku marayay qeybo ka mid ah deegaannada Somaliland, ayaa maanta xarriga ka jaray dhowr mashruuc oo ka socday gobolka Awdal, kadib booqasho isaga iyo wafdi uu hoggaaminaayo ay ku tageen magaalada Boorama ee gobolka Awdal.
Madaxweyne Siilaanyo oo xarrigga ka jaray waddo tageysa Hargeysa
Sagal Radio Services • News Report • November 9, 2012
Madaxweynaha Somaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta xadhiga ka jaray wejigga koowaad ee wadada isku xidha Magaalada Salaxley iyo magaaladda Hargaysa.